Bara kana daandii k/m 12 155 akka hojjetamu ibsame
Bara 2005tti Sagantaa waliin gahi­insa daandiiwwan baadiyyaa, daandiin k/m 12,55 akka hojjetamu Abbaan Taay­itaa Daandiiwwan Baadiyyaa Oromiyaa beeksise.
Hogganaa itti aanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Baadiyyaa Oromiyaa Ob. Jaagamaa Qananii karoora misoo­ma daandii bara kanaa ilaalchisuun ibsa kennaniin, “Sagatnaa uwwisa daan­dii naannoofi biyya keenyaa sadarkaa biyyoota galii giddu galeessaa qaban irraan ga’uuf waggoottan darban kees­satti hojiiwwan gurguddaa hojjeta­maa turaniin bu’aawwan gaggaariin galmaa’aniiru.
Muuxannoowwan gaggaarii misoo­ma daandiitiin baroota darban kees­satti argaman kunneen caalmaatti bal’isuudhaan bara kana daandii k/m 12,155 hojjechuuf karoorfannee, tat­taaffii waliirraa hin-cinne taasifamaa jira jedhaniiru.
Haaluma walfakkaatuun, sadarkaa hogganaa itti aanaa biirootti abbaa ad­eemsa hojii dhimmoota kominiikeeshi­inii mootummaa ATDBO Ad. Ummii Abbaa Jamaal gama isaaniitin, hojiiw­wan misooma daandii baadiyyaa bara 2005, aanalaee 265, godinaalee 18 ar­gaman keessatti akka gaggeeffamuufi hojii kana keessattis kontiraktaroota 469 fi gorsiitootni garee 18 kan hirmaa­tan ta’uusaa himaniiru.
Hojiichi karaa guutuu ta’een akka gaggeeffamuu fi galma akka ga’u id­doo daandiin hojjetamu hunda ciruufi irraa haxaa’uudhaan kontiraaktarootaaf qophii taasisuu akka barbaachisuus ib­saniiru.
DWaggoottan darban keessatti sochiilee misoomaa bal’inaan gagge­effamaa turaniifi yeroo ammaas deem­sifamaa jiran keessaa baadiyyaatti bu’uuraalee misoomaa babal’isuun isa tokko, Oomishaafi oomishtummaan qonnaan/horsiisee bulaa gabaadhaan hogganamuun jiruufi jireenyi ummat­ichaa akka fooyyaa’u taasisuuf gud­dina dinagdeedhaaf gahee guddaa kan qabu misooma daandii babal’isuuf tattaaffii ol’aanaa taasifamaa tureera.
Taffaaffii taasifameenis, daandii­wwan aanaafi aanaa, aanaafi ganda, akkasumas gandaafi ganda wal qaun­namsiisan bal’inaan hojjetamaniiru.
Akka Ormiyaatti hanga xumura bara 2001tti daandii kiiloomeetira 13,330 kan hojjetame yoo ta’u, gob­bina daandii bal’ina lafaan (Road density 1000/km2) 367fi gobbina daandii baay’ina ummataan (Road density km/1000 population) 0.45 irra gahameera. Bara xumuraa karo­ora guddinaafi tiraansiformeeshiinii waggaa shaniitti, dheerina daandii gara kiiloomeetira km. 42000 ol ir­raan geessisuuf kan hojjetamu ta’uu isaa ragaaleen ni mul’isu.
Galmi misooma daadnii Karoora guddinaafi tiraansiformeeshiinii wag­gaa shaniidhaan ka’ame kun akka milkaa’u waggoottan lamaan KGT darban keessatti baadiyyaatti daan­diiwwan kiiloomeetira hedduu hoj­jetamaniiru. Muuxannoowwan gaarii waggattan darban irraa argaman qindeessuudhaan bara kana (2005) yeroo kamiyyuu caalaa bal’inaan hojjechuuf karoorfamee gara hojii qabatamaatti seenameera.
Hojiiwwan gurguddaa misooma daandii naannoo keenyaa bara 2005 akkaataa hojjichi itti adeemsifamu ilaalchisee Abbaa Taayitaa Daandii­wwan Baadiyyaa Oromyaatti sadar­kaa hogganaa itti aanaa biirootti gag­geessituu adeemsa hojii dhimmoota kominiikeeshinii mootummaa kan ta’an addee Ummii Abbaa Jamaal kutaa qophii keenyaaf ibsa kennaniin, “Akka Abbaa Taayitaa Daandiiw­wan Baadiyyaa Oromiyaatti karoora keenya bara 2004 keesatti hojiin inni guddaa sagantaa waliin gahiinsa daandiiiwwan baadiyyaa ture. Sagan­taa kanaanis gandaafi ganda, gandaafi aanaa daandii walqunnamsiisu 62% ol hojjetameera jedhaniiru.
Bara kana daandii k/m 12,155 akka hojjetamu ibsame. Akka ibsa Ad. Ummiitti, hojii bara darbe kees­satti hanqinni hubannoo ummata, gaggeessaafi ogeessa biratti mul’ataa tureefi maashinarii hojii daandiif bar­baachisu gabaa irraa dhabamuu da­balatee, hamma barbaadamu hin-hoj­jetamne. Haa ta’uutii hojiiwwan bara kanaa keessatti rakkoolee bara darbe mul’ataa turan hiikuudhaan bara kana daandii K/m 12,155 hojjechuuf karo­orfamee gara hojii qabatamaatti see­nameera.
Kallattiilee raawwii hojii bara ka­naa ilaalchisees, Ad. Ummiin; “Hojii bara kanaa guutummaatti milkees­suuf, iddoo roobni jiru irraa kan hafe bakka hundatti hojiin qorannoofi dizaayinii kurmaana 1ffaa keessatti xmurameera. Konkolaataa (Dam truck) 366 bitamanii rabsamaniiru. Akkaataa daandiin hirmaannaa um­mataatiin hojjetamuu danda’amus sadarkaa hundatti hubannoon uum­ameera. Kanaafuu haala mijaa’aa uumame kanatti gargaaramnee, um­manni keenya iddoo daandiin hoj­jetamu hanga Muddee 30tti ciruufi haxaa’uudhaan kontiraaktarootaaf mijeessuu qaba. Kanaafuu caasaaleen keenya sadarkaadhaan jiran, gaggees­sitoonni siyaasaafi ummanni gahee isaanii gumaachuudhaan hojii misoo­ma daandii bara kanaa milkeessuutu irraa eegama” jechuudhaan dubbattu.
Hogganaa itti aanaa Abbaa Taayi­taa Daandiiwwan Baadiyyaa Oromi­yaa Ob. Jaagamaa Qananii gama isaaniitiin; “Sagantaa uwwisa daandii naannoofi biyya keenyaa sadarkaa biyyoota galii giddu-galeessaa qaban irraan ga’uuf tattaaffii ol’aanaa taasi­famaa tureera. Gaggeeffamaas jira.
Keessattuu waggoottan calmaan KGT keessatti hojiiwwan gurguddaa kan hojjetaman yemmuu ta’u, bara kana (2005) humna qabnu hunda du­guugnee itti fayyadamuudhaan sa­gantaa waliin gahiinsa daandiiwwan baadiyyaa aanaalee 265, godinaalee 18 keessatti daandii k/m 12,155 hojj­echuuf karoorfannee socho’aa jirra. Hojii kana keessattis kortiraaktaroota 469 fi gorsitoota garee 128 ta’aniis ni hirmaatu. Kanaafuu hojii misoo­ma daandii bara kanaa milkeessuuf caasaaleen dhaabaa, mootummaafi ummanni sadarkaa hundatti gahee isaanii gumaachuu, kutannoodha­na hojjechuutu irraa eegama” jed­haniiruhumarrattis, Ad. Ummiin gal­mi misooma daandii bara kanaa akka milkaa’u caasaaleen dhaabaa, mootum­maa fi ummanni gahee irraa eegamu akka gumaachan ergaa dabarsaniiru